Apple Mepu inovhura kuruzhinji kutsvaga kwePOI | IPhone nhau
Apple Mepu inovhura kuruzhinji kutsvaga kwePOI
Apple inoramba ichiedza, inoda iwe Apple Mepu mukwikwidzi akakodzera weiyo hombe Google Mepu uye zvishoma nezvishoma iwe unogona kuzviita ... Uye neshanduro yazvino yeIOS 10 uye macOS Sierra takaona kuvandudzwa kukuru muchimiro uye mukushanda kweApple Mepu, a Apple Mamepu andinoshandisa zvakanyanya nekutenda kune izvi zvigadziriso zviri kuitwa naApple.
Uye vakomana vanobva kuCupertino havadi kuti Apple Mepu ive chimwe chinhu cheDevices chete o Macs, Apple inoda kuunza Apple Mepu kune chero munhu uye kuita iyi chikuva apo patinogona kuwana mapoinzi ekufarira pasina matambudziko. Zvitsva: Apple iri kuunza kuSafari inotsvaga Apple Madhi makadhi ane POI ruzivo ...
Izvo iwe zvaunoona mune iyo skrini ndeye Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport kadhi, a Kadhi rinoratidzika semhedzisiro yekutanga paunenge uchitsvaga zita renhandare mu Safari browser. Zviripachena kuti ndiri kutaura nezvebrowser yevakomana kubva kuApple, zvinoita zvisingaite kuti Google ipedzisire yabatanidza makadhi eApple Mepu muinjini yavo yekutsvaga, vane Google Mepu uye havana kana basa nemepu yevakomana kubva Cupertino achiba traffic kubva kwavari.
Aya makadhi ane zvinongedzo zvinotitora zvakanangana neApple Mepu (senge mafambiro ekutyaira kana mepu unozviona), kana nhare dzekubata uye kunyangwe webhusaiti yacho saiti izvo zvatiri kutsvaga. Mune dzimwe nzvimbo iwe unogona zvakare kuwana saiti wongororo dzakapihwa nevashandisi veYelp. Zano rakanaka rekuenderera mberi nekuvandudza Apple Mepu iyo ichaedza zvechokwadi kupinda mune mazhinji mawebhusaiti. Tichaona zvinoitika nezvose izvi kana Apple Pay (iyo ichakurumidza kusvika kuSpain) ichiwedzera kune dzimwe nyika, iyi itsva Apple Mepu pawebhu inogona kunge iri nzvimbo yakanakisa yekuwana nzvimbo neApple Pay.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Mepu inovhura kuruzhinji kutsvaga kwePOI
HiRise 2, hwaro hwakachinjika hwakanyanya kune yako iPhone ne iPad